ဒေါ်။ Marvel မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
ဒုတိယ Lego Marvel Collectible Minifigures စီးရီးများသည် 2022 ခုနှစ်အတွက် ကောလဟာလများ ထွက်ပေါ်နေသည်။
23 / 12 / 2021 28 / 12 / 2021 ခရစ် Wharfe 136 Views စာ0မှတ်ချက် အသက် 71032 စီးရီး 22, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Marvel, Lego Minifigures, Lego Overwatch, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, သေးသေးလေး, မွန်း Knight ဟာ, ဒေါ်။ Marvel, Overwatch, Overwatch 2, သူမသည်-ရှိသွားပြီ, Spider-Man, Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါ LEGO Group, အဆိုပါ Muppets, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
2022 တွင်လမ်းပေါ်ရှိအခြား LEGO Collectible Minifigures စီးရီး၏ကနဦးအစီရင်ခံစာများသည်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီးနောက်ဆက်တွဲကိုညွှန်ပြသည်။
11 / 12 / 2021 12 / 12 / 2021 Matt Yeo ပါ 147 Views စာ0မှတ်ချက် 10784 Spider-Man Webquarters Hangout, 76076 ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်ဂျက်လိုက်စား, Avengers, ကပ္ပတိန် Marvel, Disney+, Lego, Lego Marvel, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, lego minifigure, Marvel, Marvel ရုပ်ပြ, Marvel စတူဒီယို, Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, ဒေါ်။ Marvel, Spidey နှင့်သူ၏ Amazing Friends, လက်စားချေသူများ, အဆိုပါ LEGO Group
Marvel စတူဒီယိုများသည် လာမည့်လာမည့်အချိန်ကို ပထမဆုံးကြည့်ရှုရန် ကမ်းလှမ်းထားသည်။ Disney+ ပြပွဲ
14 / 11 / 2021 14 / 11 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 361 Views စာ0မှတ်ချက် 76076 ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်ဂျက်လိုက်စား, Red Hulk vs 76078 Hulk, Groot, ငါ Groot ပါ, Lego, Lego Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel စတူဒီယို, MCU, မွန်း Knight ဟာ, ဒေါ်။ Marvel, လျှို့ဝှက်ချက်ကိုကျူးကျော်, သူမသည်-ရှိသွားပြီ
Marvel မကြာသေးမီက စတူဒီယိုများသည် လာမည့် streaming စီးရီး၏ရွေးချယ်မှုကို p အနေဖြင့်ပထမဆုံးကြည့်ရှုကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။art of Disney+ နေ့၊ ပူဇော်သက္ကာ၊
12 / 11 / 2021 12 / 11 / 2021 ခရစ် Wharfe 343 Views စာ0မှတ်ချက် အန်ဒို, Boba fett, Disney, Disney+, Disney+ နေ့, Facebook က, Hawkeye, Instagram ကို, တောတွင်း Cruise နဲ့, Lego, Lego Marvel, Lego Star Wars, Marvel, မွန်း Knight ဟာ, ဒေါ်။ Marvel, Obi-wan kenobi, Shang-Chi နှင့်ဆယ်ပါးလက်စွပ်၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ, သူမသည်-ရှိသွားပြီ, Star Wars, Star Wars: Boba Fett ၏စာအုပ်, Star Warsဖြေ, Boba Fett ၏စာအုပ်, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါ Mandalorian, တွစ်တာ, WandaVision
24 / 09 / 2021 24 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 347 Views စာ0မှတ်ချက် 10759 Elastigirl ရဲ့ခေါင်မိုးပေါ်လိုက်စား, 76076 ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်ဂျက်လိုက်စား, Disney+, Hawkeye, ကိတ်ဆရာတော်, Lego, Lego Marvel, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, အသေးစား, Ms Marvel, ဒေါ်။ Marvel, streaming များ, အဆိုပါ Marvels
18 / 01 / 2021 18 / 01 / 2021 ခရစ် Wharfe 1244 Views စာ0မှတ်ချက် 71026 DC စူပါသူရဲကောင်းများစုဆောင်းထားသောအသေးစား, အသက် 71029 စီးရီး 21, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Hawkeye, Lego, Loki, Marvel, Marvel Haves ရှိရမည်, ဒေါ်။ Marvel, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
11 / 12 / 2020 11 / 12 / 2020 ခရစ် Wharfe 955 Views စာ0မှတ်ချက် သံချပ်စစ်ပွဲများ, Disney+, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, Hawkeye, ငါ Groot ပါ, သံမဏိart, Lego, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Loki, Marvel, မွန်း Knight ဟာ, ဒေါ်။ Marvel, အဆင့် 4, လျှို့ဝှက်ချက်ကိုကျူးကျော်, သူမသည်-ရှိသွားပြီ, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
11 / 12 / 2020 11 / 12 / 2020 ခရစ် Wharfe 916 Views စာ0မှတ်ချက် ပုရွက်ဆိတ်-Man, Ant-Man နှင့် Wasp: Quantumania, Black က Panther, အနက်ရောင် Panther II, ကပ္ပတိန် Marvel 2, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, Fantastic Four, Lego, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ 2, Marvel, Marvel စတူဒီယို, ဒေါ်။ Marvel, အဆင့် 4, Shang-Chi နှင့်ဆယ်ပါးလက်စွပ်၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ, Thor: အချစ်နှင့်မိုးကြိုး, ဗွီဒီယိုဂိမ်း